Laga bilaabo bisha Abriil, haddii aad Mac ka iibsato Ruushka, waxay lahaan doontaa codsiyo waddankii hooyo | Waxaan ka socdaa mac
Laga bilaabo bisha Abriil, haddii aad Mac ka iibsato Ruushka, waxay yeelan doontaa codsiyo ka yimaada waddanka hooyo
Laga bilaabo AbriilHaddii Apple ay rabto inay sii wado iibinta Mac-yada iyo aaladaha kale ee dalka, waxay ku qasbanaan doontaa inay oggolaato barnaamijyo taxane ah oo u gaar ah oo ay naqshadeeyeen naqshadeeyayaasha Ruushka. Tan waxaa dejinaya sharciga dalka waana in shirkaduhu u hoggaansamaan. Maaha inay jiraan wax badan oo xulasho ah. Ka soo horjeedka waxa Yurub ay difaacdo, Ruushku wuxuu doonayaa in wax soo saarkeeda qaran lagu daro kuwa caalamiga ah.
Sharciga cusub ee dhaqan galaya laga bilaabo bisha Abriil 1deeda dalka Ruushka wuxuu u baahan yahay in shirkadahaas iibiya aaladaha teknolojiyadda ee dalka ay waajib ku tahay u oggolow rakibidda qaar ka mid ah codsiyada maxalliga ah. Sababtaas awgeed, Apple, si uu u sii wado iibinta Mac, iPhone, iPad iyo wax badan, iwm, waa inuu oggolaadaa codsiyada ay dejiyeen dadka deegaanka Ruushku in lagu daro barnaamijka softiweerka ee shirkadda Californian.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa meel mariyay sharciyo bishii Nofeembar 2019 ee u baahan in lagu rakibo barnaamijyo ay dowladdu ansixisay oo ku saabsan qalabka elektiroonigga ah ee lagu iibiyo dalkaas. In kasta oo soo bandhigida xeerarku hore dib loogu dhigay, haddana waxay u muuqataa taas Apple waxay isku diyaarineysaa inay u hogaansato sharciga ka hor intaan la soo bandhigin bishii Abriil.
Xafiiska gobolka ee Apple ayaa xaqiijiyay inuu jiro heshiis horey uga jiray arintan isla markaana laga bilaabo 1da Abriil ay soo bandhigi doonaan shaashad cusub isticmaaleyaasha. Xulashada codsiyada ay soo saareen horumariyeyaasha Ruushka ayaa la soo bandhigi doonaa. Isticmaalayaasha ayaa awood u yeelan doona inay doortaan codsiyada noo oggolaan doona ama diidi doona in lagu rakibo shaashadan iyada oo qayb ka ah hawsha dejinta.
Hadda waxay weli ka wada hadlayaan Apple barnaamijyadooda ay tahay in lagu daro liiska. Liis aan xidhnayn iyo inay is bedbeddeli karto kolba waqtiga ka dambeeya. Xanta ayaa leh in barnaamijyada laga hadlayo ay ka mid yihiin:
codsi ah adeegyada gobolka
mid ah nidaamka lacag bixinta Mir Bixin
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Laga bilaabo bisha Abriil, haddii aad Mac ka iibsato Ruushka, waxay yeelan doontaa codsiyo ka yimaada waddanka hooyo